အတားအဆီးများ၊ ကျော်လွှားကြစို့ - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on April 2, 2012 at 14:12 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မည်သည့် ဘာသာစကားကို သင်ယူသည်ဖြစ်စေ ကလေးဘ၀မှာ ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်း သိသာထင်ရှားပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ အတွေ့အကြုံအရဖြစ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်မှ တွေ့ရှိမှုအရ ဖြစ်စေ ဒီအချက်တွေကို သိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးများရဲ့အားသာချက်က စိတ်ပိုင်း၊ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်အရာ အတားအဆီး မရှိတာ၊ နည်းပါးတာပါပဲ။ ကလေးများ အသံထွက်မှားယွင်းခဲ့ရင် အချင်းချင်းလည်း အပြစ်မယူ၊ မှားတယ်လို့လဲ ထူးထူးခြားခြား သတိမထားမိပဲ ကစားစရာရှိတာ ကစား၊ သွားစရာရှိတာ သွားကြတာပါပဲ။ ကလေးပေကိုး။
ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေကျတော့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ များလိုက်တာ။ လုပ်ဆောင်စရာ များကြတဲ့ အခါ ပြောစရာစကားတွေများလာတယ်။ စကားများလာတာနဲ့အတူ အမှားတွေလည်း ပါနိုင်တာပေါ့။
ဒါ့ကြောင့် ကလေးများလိုတော့ ရှာရှာဖွေဖွေ မှားလို့ကလည်း မဖြစ်ပြန်၊ မှားရင်လည်း နားလည်မှုတွေ လွဲမှားနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဟန့်အတားတွေပိုများပါတယ်။ အသံထွက်တွေမှန်အောင် ဘယ်လိုသင်ကြားပို့ချကြမလဲ။
သင်တန်းတွေမှာ ကလေးများ အခက်အခဲကြုံနိုင်တဲ့ အသံများ၊ စကားလုံးပေါင်းများကို အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာ/မများက သင်ပုန်းပေါ်မှာ ရေးချကြပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲများကို အချင်းချင်း ဝေငှလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အသံများ၊ စာလုံးပေါင်းများကို ရေးချပြီးနောက်၊ ဆရာ/မတစ်ဦးချင်းမှ အသံမှန်ကို ဘယ်လို သင်ကြားတယ်ဆိုတာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားကြတဲ့ ကလေးများ တွေ့ကြုံနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေထဲမှာ အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ပါတယ်။
အားထည့်ပြီး ဖိပြောတဲ့ (Stress)
၀ါကျမှာပါဝင်တဲ့ စကားလုံးအရေအတွက် (number of words)
စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံးကြား အသံကူးခြင်း (linking)
မိခင်ဘာသာစကားမှာ မရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံများ (sounds absent from the mother tongue)
မိခင်ဘာသာစကားမှာ ရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့ ဆင်တူယိုးမှား အသံများ (False friends)
စာသင်ပြီးမှ စကားသင်တဲ့ အခါ အားနည်းချက်က၊ စာနဲ့ စကားကို တစ်ချိန်လုံး တိုက်ဆိုင်ပြီး ကြည့်နေတတ်တာပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်စကားကလည်း အချေးအငှားထူလိုက်တဲ့ ဘာသာစကား။ ရာထောင်ချီတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားများမှ ချေးငှားလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကလည်း အများကြီးဆိုမှ အများကြီးပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါး၊ ၀တ္တုတိုအချို့မှာ ဆင်ဦးစီးကို မြန်မာသံယူပြီး “Oozie” လို့လည်းခေါ်ရဲ့၊ အိန္ဒိယဘာသာနဲ့နွယ်ပြီး “Mahout” လို့လည်း ဆိုရဲ့။ ထကြသောင်းကျန်းတာကို မလေးစကား “amok” ကိုယူပြီး “ran amok” လို့လည်းဆိုပါသေးတယ်။ ဒါက လက်လှမ်းမီတဲ့ အာရှစကားအချို့နဲ့ သာဓကဆောင်ရတာပါ။ အခြားဘာသာစကားများမှ ချေးငှားထားတာလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ဒီတော့ စကားလုံးတစ်လုံးချင်း တိုက်ဆိုင်အသံထွက်လို့ရတဲ့ အခါရှိသလို၊ မရတဲ့ အခါတွေက ပိုများပါတယ်။
Stress အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
မြန်မာစာသင်သားများ အခက်အခဲကြုံရလေ့ရှိတဲ့ stress ကိစ္စဆိုရင်လည်း ဆရာ/မများမှ Modelling ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ရင် ကလေးများကတော့ အခက်အခဲ သိပ်မရှိပဲ ကြားနိုင်၊ ပြောဆိုနိုင်ကြပါတယ်။ မြန်မာသံနဲ့ မတူ တမူထူးကဲနေတဲ့အတွက် ကလေးတော်တော်များများ လိုတာထက်ပိုပြီး stress သံတွေ ထွက်တာကြားဖူးပါတယ်၊ ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့အတွက်ကတော့ ကစားစရာအသစ်တစ်ခု ရသလိုပဲ အချင်းချင်း အပြိုင်အဆိုင် ရွတ်ကြ၊ ဖတ်ကြနဲ့ပါ။ တချို့ ကလေးများဆိုရင် အသံအကျယ်ချင်းတောင် ပြိုင်ကြပါသေးတယ်။
ဆရာက တစ်ခွန်းဆို သူတို့ကနှစ်ခွန်း သုံးခွန်း လိုက်ဆိုချင်ကြတယ်။ stress သံကထူုးခြားနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူုမြို့တော်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ အရင်းအမြစ်တချို့တူတဲ့ ဂျာမန်စကားကို ဆရာ မိုက်ကယ်ရှမစ်မှ သင်ကြားဖူုးပါတယ်။ ဂျာမန်သံက ဆန်းကျယ်လွန်းတော့ အတန်းတစ်ခုလုံး ကြွက်ကြက်ညံအောင် ကလေးတွေ အော်ဟစ်ပြီး ဆရာနောက် လိုက်ဆိုကြပါတယ်။ ကလေးများက အုပ်စုလိုက်ဆိုတော့ စိတ်ထဲလုံခြုံစွာ အော်ကြပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းတော့ စစ်လို့မရပါဘူး။ ဟိုကလေးထစမ်း။ ဒီအသံလေးပြောစမ်း ဆိုရင် အလိုလို ဆွံ့သွားကြပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် အသံတွေ သင်ကြားတဲ့ အခါမှာလည်း အလားတူပါပဲ။
ကလေးများကို ကစားစရာပေးထားရင် အတန်းထိန်းရခက်သလို ဆရာ/မများမှ stress ထွက်တဲ့ activities များမှာ စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းမှပဲ ပတ်ဝန်းကျင် အတန်းများ အနှောက်အယှက်ဖြစ်မဲ့ဘေးမှ ဝေးကြရပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အပါအ၀င် ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ stress မှာ အင်္ဂါရပ် သုံးခုပဲ ရှိပါတယ်။
၁. ကျယ်လောင်ခြင်း (loudness)
၂. မြင့်ခြင်း (height)
၃. ရှည်လျားခြင်း (length)
ဒီအင်္ဂါရပ် သုံးမျိုးလုံး စုံပြီဆိုရင် stress ကို ပီပီသသ ထွက်နိုင်ကြတာပါပဲ။ စာနဲ့ရှင်းပြနေလို့သာ ရှုပ်ကောင်းရှုပ်နေမှာပါ။ တကယ် ပြောဆိုတဲ့ အခါ အစောပိုင်းက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အတန်းတစ်ခုလုံး ကြက်ကြက်ညံအောင် ကလေးတွေ ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။
stress ကို dictionary အကိုးအကားနဲ့ ဘယ်လိုလေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတာ နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
Permalink Reply by seng mai on April 3, 2012 at 11:46
Permalink Reply by Moe Moe Thu on April 3, 2012 at 11:53
Permalink Reply by Wai Yan Tun on April 3, 2012 at 13:53
Permalink Reply by eaint moe sat on April 3, 2012 at 14:29
Permalink Reply by AYOOB AKHOON on April 3, 2012 at 16:10
hello am ayoob akhoon islam
Permalink Reply by win win shwe on April 4, 2012 at 11:37
Permalink Reply by MICKLE on April 5, 2012 at 19:39
Permalink Reply by thwe thwe phyo on April 10, 2012 at 11:23
Tksalot for your sharing.
Permalink Reply by La Yaung on April 11, 2012 at 10:54
Permalink Reply by Khin Thandar on April 18, 2012 at 20:32
Permalink Reply by Yin Win Aye on May 30, 2013 at 17:02